Author: Negar Yozshushicage
Olaanaa Zoogaa, Gizziitinnaa Gizooti. Ilmaan kormaa sadrakaa Dabballoomaa fixan Gaammotti dabru.
Bara itti Gadaan sirna gutuu ture sana akka silaa tahutti galmeessuun hindandaymane. Hawaasa keessatti paartiileen uumamtu turan jechuudha. Manguddoota lammii keessaa ammoo, kan warra hangafaa hunda dursu. Bakka kanarraa Amaara Saaynitiifi Bagamidritti duuluu jalqabe.
Yaada kanaaf deebisaa kenni Cancel reply. Haalli isaanii warra biyya bulchuu ykn qondaaloota Gadaa wajjiin walitti hidhataadha. Kalandariin Oromo kuniis, astronoomiin kan qoratamee argameedha. kitqaba
Kan hawaasa bakka lamatti qooduudha. Marii seeraafi heeraarratti argamanii akka seerriifi heerri Gadaa hin dabneef gorsuufi qajeechuudha.
Hubannootni karaa cufaa jiru akka aadaatti fudhatamee hawaasa keessatti fudhatama. Dhumarratti aadaan, polotikaafi amantiin walitti hidhatoo tahuun ifaadha. Kanaaf, Gadaan waggaa saddeet saddeetiin lakkaawama. Guutuu hawaasichaa keessatti yeroo itti aangoon polotikaa Gadaa tokkorraa kanitti dabru, ayyaana kanarratti horiin loon qalamanii, nyaachisni oromok godhama. Ilmaan kormaatu kormaatu keessa daddabran yoo tahellee, jirenya dhala Oromoo karaa polotikaa, amanti, aadaa, dinagdeefi waraanaafi kkf keessatti kan ilaalu addatti maqaa haaqabaatan malee akkaataan guddinaa, dalagaafii jireenyaa, kan ilmaan Jaarsaa wajjiin tokkuma.
Haalli kun akkamitti ture?
Warri quxxusuu isa hordofu. Isaaniis, Marsaan duraa Gadaa abbaa yeroo tahu, inni lammaffaa Gadaa ilmaati. Haa tahu malee Birmajiin gara dhuma Gadaa isaati jala Gojjaam keessatti moohame. Goso tokko keessa karra hagafaafi quxxusuu nijiraatu. Galaawudoos mooti Habashaa waana isaa kan nama Adaal Mabraq jedhamuun hoogganamu Dawarrootti bara tti erge. Sababootii godaansaa uuman akkuma aeenaa sanaafi haala yeroo sanaarratti hudeeyfama.
Sirna Gadaa keessatti hawaasni Oromoo gartuu lamatti qoodamee ijaarame. Arsii keessatti — orlmoo Gadaa tti taha Bakka heddutti Gadooma keessatti ilmaan kormaa martinuu sadarkaa Gadaa keessaa hamma guutuu biyyatti dhibdee polotikaa, dinagdee, hawaasafi waraanaa cufa furuuf itti gaafatama qaba.
Galaawudoos humna Habasha gurmeesse ofirraa ittise. Yeroo kana keessatti dhimma biyya, bulchiinsa, sera, aadaa, amantiifi seena dabre baratu. Sana keessaahillee irra guddaan kan baroota dhihooti.
Hambisaan duula gurguddaa Shawaa keessatti haa godhu malee, Amaara dhiibuu hin dandeenye. Tuulama keessatti — waggaa tti b. Gidiraafi gochi gara- jabummaan Oromoorratti raawwatu kun mootii Minilikiin qofa hindhaabbanne.
Kuniis sirnicha sirna aadaa fakkeessa.
Namchi mataan amantii Qaalluu hoggaa jedhamu, haati mana isaa ammoo, qaallitti jedhamti. Tuulam keessatti — Itti makoo zeenaa. Aadaa sana keessaa immoo amantiin maddee maal akka fakkaatu kophatti ilaalla. Aadaa kanaafi kana fakkaatan ala bahuun hawaasa keessaa nama baasa. Biyya keessa sossohanii ummataan walbaruu, akkanatti aangoo polotikaaf ofqopheessu jechuudha. Namoota biraa wajji jiraata, hojjataas. Aangoo polotikaa keessatti paartii tokko tahu.
Aadaa sirna gadaa Dhallii namaa akkaata itti naannoo kiitaaba hubatee, itti jijjiiru qaba.
Kana keessatti hooda, safuu, beekumssa, qaroomaafi yaadumsi qooda guddaa kennu. Dabalataanis, Dirribii Damusee, Aadaa kanaa ala bahuun, badii isa sadarkaa oliitti waan fudhatamuuf, namuu aadaa tahuu isaa waan beekuuf sirna Gadaa keessa jiru kabajee osoo keessaa hinbaasin kabajee jiraata.
Kiiloleen Gadaa isaa fixee Biifoleetti dabarse. Kanaf, hiriyyummaan karaa hawaassfi polotikaa Oromootaa walitti hidhuudha. Tahullee sadarkaaleen Gadaa jiruuf jireenya dhala Oromoo mara calaqqisiisa.